Ingi For Canon
Ingi For epson
Ingi For HP
Ingi For Lexmark
Ingi For Samsung
Purinda Consumables Solution
TIANSE GLOBAL Agent AIDA
Somumwe munyika nyanzvi Vagadziri kudhinda consumables uye hofisi zvokushandisa , isu kudada zvikuru pakupa kupfuura akagadziridzwa, akakodzera hofisi zvinhu uye mabasa. Office vanodei zvakawanda uye tinosungirwa Rokusangana vose. Nokudaro, tiri nguva dzose akatarisa panze zvebhizimisi collaborations pamwe nevamiririri yose. Tinokukoka nomwoyo wose kuti kuva mumwe wenhengo dzedu TIANSE Family. Ngatishandirei pamwechete basa nani vatengi redu uye kuti vabudirire yakatokura!
R Strong & D kugona
Ane nyanzvi R & D chikwata, tinonzwa zvikuru utsanzi uye nepurani. Tinokoshesa pfungwa okusika uye vari kuvavarira kuti zvakagadzirwa uye kuvandudzwa pamusoro zvinhu zvedu.
With makore anopfuura 10 'Zvakaitika indasitiri, isu pfungwa pane zvatinoita uye akakurukura widest siyana pakudhinda consumables uye hofisi zvokuyamura dzakasiyana dzinoti uye zvekunyanyisa.
Kuzvipira kuna Quality
With zvachose QC kwacho uye zvakaoma mu-imba nekuongororwa, tinoita mhiko yakasimba kuitira vatengi vedu chete kugamuchira chemhando yepamusoro zvigadzirwa pamwe rakadzika zvinogoneka mutengo.
Fast uye Nguva Delivery
With firimu chawo akafukidza 35,000 mativi metres Huizhou uye 5 dzokuchengetera makuru pamwe zvachose yokuchengetera zvinhu nzvimbo kusvika 10,000 mativi metres China, hurukuro inogona akavimbisa mukati maawa 48 ari makuru maguta Chinese.
All-kumativi Customer Service
Ane nyanzvi chikwata vatengi, 193 nyanzvi vatengi nzvimbo uye 2300 pamwe nehoro munyika, isu kupa zvose-kumativi uye customized mabasa vatengi dzedu dzose nguva.
Vaivimbwa TIANSE Brand Kukosha
TIANSE muchiso zvigadzirwa wakanzwirwa nyasha zvikuru nevanhu vose nezvipfuwo uye mhiri kwemakungwa vatengi, uye dzinotengeswa chaizvo zvakanaka zvikuru, e-commerce platforms kufanana Tmall.com, JD.com uye Amazon, etc. Pari, TIANSE ane zvinopfuura 80 muchiso nevamiririri yose.
Pokutanga Free Sample Support
Promotional Brand Gifts Support
Regional Customer Resource Support
Professional Agent mushambadzi Support
Professional Technical & After-okutengesa Support
Full kuziva TIANSE yemakambani tsika, mabhizimisi uzivi uye kukura nzira; chido chakasimba pamwe TIANSE kuti bhizimisi ubudirire.
A kambani kha yomunharaunda munzvimbo navamwe mabhizimisi simba uye matsamba.
Vashoma kugadzikana mutengi pfuma uye inogona kuenderera mberi bhizimisi.
Strong yokutengesa mashandiro kugona ari munzvimbo nezvakanaka mabhizimisi mukurumbira.
Join TIANSE Now!
Tinokukoka nomwoyo wose kuti kuva mumwe wenhengo dzedu TIANSE Family. TIANSE achava zvaunogona naye. Tirwisane kuzoshumira mabhizimisi kubudirira uye zvibereko takunda zvisamumirira zvabuda.